काठमाडौंमा लागु भयो अनौठो नियम – Khabaarpati
काठमाडौंमा लागु भयो अनौठो नियम
January 8, 2021 goodmamLeaveaComment on काठमाडौंमा लागु भयो अनौठो नियम
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कुकुर पाल्न सौखिन कुकुरधनीले अब आफ्नो कुकुर वडा कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
घर पालुवा कुकुरको उचित संरक्षण नगरिएको, बटुवा वा छरछिमेकमा है’रानी ग’राएको र सार्वजनिक स्थलमा म’लमूू’त्र त्या’ग गराएर फोहोर गरेपछि दर्ता अभियान सुरु गर्न लागेको हो । महानगरले सचेतना अभियान चलाउँदा पनि नभएपछि अब दोस्रो चरणमा कुकुर धनीलाई का’रबाहीसमेत गर्ने भएको छ ।
कुकुरधनी माथि निगरानी**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरपालुवा कुकुरलाई सार्वजनिक स्थलमा शौच गराउने कुकुरधनी उपर निगरानी बढाएको छ । ओमबहाल, मैजुबहाल, जयबागेश्वरी, सिफल, कालोपुुल लगायतका क्षेत्रका बाटोमा कुकुरलाई शौच गराइरहेका कुकुरधनीलाई नियन्त्रणमा लिएर यसो नगरिदिन अनुरोध गर्दै आएको छ ।
महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाएको छ । सचेतनासँगै काठमाडौँ महानगरमा छाडा कुकुरको घाँ’टीमा ह’रियो र’ङको पे’टी बाँ’ध्न थालिएको छ ।
महानगरपालिकाको पशु व्यवस्थापन महाशाखाले महानगरमा रहेका २२ हजार यस्ता कुकुरको ब’न्ध्याकरण गरिसकेको छ । महाशाखा प्रमुख डा. अवधेश झाका अनुसार अब बाँकी करिब पाँच हजार कुकुरको ब’न्ध्याकरण थालिएको छ ।
हालै वडा नं ३१ मा ब’न्ध्याकरण कार्य सकिएको छ । उहाँले अबको छ महिनाभित्र सबै छाडा कुकुरको बन्ध्याकरण सक्ने र नियमित रे’बिज वि’रुद्धको सुई दिने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको बताउनुभयो ।
महानगरपालिका–७ का सदस्य कृष्णमणि भट्टराईका अनुसार छा’डा गाई, गोरु र बहरका सन्दर्भमा भने कान्जी हाउसको व्यवस्था र मलमूत्रको प्राङ्गारिक मल उपयोग गर्ने सोचिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
विश्वकै अनौठो आलु, जसको सेवनबाट मानिस सँधै जवान रहन्छ !
विवाहकै रात यस्तो घटना भएपछि राखी सावन्तलाई होटलमै छोडेर हिँडेका थिए उनका श्रीमान्, पहिलो पटक रुँदै आफ्नो पीडा सुनाइन् राखीले
दुर्गेश थापाले आफ्नो पारिश्रमिक बाँकेका आ’गला’गी पी’डितलाई खर्चिए
March 12, 2021 goodmam
सम्पर्क गर्दा २६ बर्षे युवाको लि´ ङ्ग भाँ´चियो, रातकाे ३ बजे यस्तो अवस्थामा अस्पताल पुगे (भिडियो सहित)
February 9, 2021 goodmam
४ सय ५० वटा सि’लिण्डर बोकेको ट्रकमा च’ट्याङ पर्दा अढाइ घण्टासम्म विष्फो’ट, चालक भने बाँ’चे July 29, 2021
मध्यरातमा आफ्ना नजिककाहरुलाई सुटुक्क बोलाएर खोप लगाउन थालेपछि यसरी लखेटिए मेयर पराजुली July 29, 2021
फेसबुकमा पर्‍यो लभ, जब भेट्न पुगे युवा युवती, देख्ने बित्तिकै किन भयो यति ठूलो ववाल? July 29, 2021
उच्च जोखिम बढेपछी झापाका १० पालिकामा सिलबन्दी गरियो July 29, 2021
आफ्नी सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बुवाको घोसणा July 29, 2021